Xaaskiisii kowaad ayaa fashilisay arooskiisa cusub kadibna dadkii baa garaacay | Xaysimo
Home War Xaaskiisii kowaad ayaa fashilisay arooskiisa cusub kadibna dadkii baa garaacay
Xaaskiisii kowaad ayaa fashilisay arooskiisa cusub kadibna dadkii baa garaacay
Asif Rafiq Siddiqi, oo nin gadhweyn, yara buuran oo da’diisu tahay 30-meeyada, ayaa waxaa wax gaadhsiiyey oo dhirbaaxo kala daalay dadkii badnaa, funaanadiisii iyo surwaalkiisiiba waa la jeexjeexay waxaana uu ka dhex baaba’ay rabshaddii arooskiisa ka dhacday.
“Maxaa jira walaal’ ayaa mid ka mid caruusadda qaraabadeedu weydiiyeen gabadha, sida laga arkay muuqaal la duubay intii xafladdu socotay.
Arooska waxaa qastay gabadh ku andacootay inay tahay xaaskiisii dhabta ahayd
“Waa ninkaygii, sidoo kalena waa aabbaha carruurtayda. Waxaanu ii sheegay inuu saddex casho aadayo Hyderbad” ayay ku cabatay, iyadoo gacanta ku wadata wiil yar oo ay sheegtay inuu isagu dhalay.
“Taasi waa soddohday, taasina waa dumaashiday Jethani, oo ii sheegtay in hooyadeed oo ninkaygana dhashay ay xanuusanayso saddex cashaba, oo dhakhtar taal” gabadhii Siddiq ayaa sii wadatay hadalkeedii, ka hor intii aysanba toos u abbaarin caruusaddii cusbayd. Waxayna ku tidhi ” Naayaa, ma ogtahay in kani ninkaygii yahay? Xataa kama werwerayo miyaa cunuggiisan yar’
Halkaa kuma ay joogsan waxay sheegtay in ninkani guursaday 2016, xilligaas oo ay kulmeen jaamacadda Karachi’s Federal Urdu University, halkaas oo uu xilligaa ka shaqayn jirey.
Muuqaal laga soo duubay, markii uu ka dhex dhuuntay gaadhi bas ah oo taagnaa, waxaa la arkayey iyaga oo ku qaylinaya soo bax “so bax haddii kale, baskaba waannu kugu gubi doonnaa”